ကိုယ်ချင်းစာ တရား ထားပြီး အောက်စီဂျင် အိုးတွေကို လူသား အချင်းချင်း မတန်တဆမ ရောင်းကြဖို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး…. – Shwe Naung
ကိုယ်ချင်းစာ တရား ထားပြီး အောက်စီဂျင် အိုးတွေကို လူသား အချင်းချင်း မတန်တဆမ ရောင်းကြဖို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး….
N N | August 3, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးဖွေးက တော့မြန်မာ့ အကယ်ဒမီ ဆုရှင်သရုပ် ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။သူမက အောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီးကျ ရာဇာတ်ရုပ်ကို လဲပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်သူ တစ်ယောက်ပါ။
ဖွေးဖွေးနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးဝတ်မှုန်ရွှေရည် ဆိုတာလဲ ညီမဝမ်းကွဲ တွေပါ။ နှစ်ယောက် လုံးကေ အာင်မြင်ကျော် ကြားကြတဲ့ မင်းသမီး တွေပေါ့။ ဖွေးဖွေးက တော်လှန်ရေး ကာလတွေစကတဲက ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ပြီးဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
ယနေ့ထိ လဲပြည်သူနဲ အတူရှိ နေဆဲပါပဲ။သူမက(၅၀၅) ကထွက်ပြေး နေရပေမယ့် ရောဂါဆိုး အပေါ်အမှီ ပြုပြီးအမြတ် ကြီးစားနေကြတဲ့ လူတစ်ချို့ကို ကိုယ်ချင်းစားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာပြီးကမ် ပိန်းလေးတစ်ခု မှာပါဝင် လာဖို့ဖိတ် ခေါ်ထားပါတယ်။
“ကျေးဇူးပြု၍စိုးရိမ်ပူပန်စွာဖြင့် ရန်ကုန်သာမက တပြည်လုံးကို ကယ်တင်ဖို့လို နေပါပြီO2 ပြဿနာက မြို့တိုင်းကြုံ နေရပါပြီ LetUs Breatheဆိုတာ ဘာလဲ?ဒီ let us breathe campaign ဟာမြန်မာလို ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ရှူခွင့် ပေးပါလို့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ရှူ ခွင့်ပေးပါ။
မတရား သဖြင့်ဈေးတွေ မတန်တဆနဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေ‌ မရောင်း ကြပါနဲ့တော့၊ မလိမ်ကြ ပါနဲ့တော့၊ အိုးအသေးတွေများများသွင်းပေးကြပါ၊အလွယ်တကူ အောက်စီဂျင်ရှူခွင့် ပေးပါ၊ အိုးတွေ ငှားပြီးလည်း လိုအပ်သူတွေ အတွက် ပြန် ပို့ပေးကြပါ၊
အမြတ် ကြီးစားပြီး မရောင်းကြ ပါနဲ့တော့ ၊မြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ပေးကြပါစတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ပါပါတယ်။လူလူ ချင်းစာနာ ကြရအောင်ပါ၊အားလုံးပဲLetUsBreathe Campaignမှာ ပါဝင်ပေးကြပါ။”ဖွေးရဲ့လူမှု့စာမျက်နှာမှ ာဖိတ်ခေါ် ထားပါတယ်နော်။
အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…
ကောင်းမှု တွေ နဲ့ အစပြုရင်း အေးချမ် းတဲ့ ဘုရားရိပ် တရားရိပ် မှာ ကုသိုလ် ယူနေတဲ့ ဘေဘီမောင်….
သူမရဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ကပြထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် J NAW ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး……..
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..